Buy Asus i3 3rd, Nvidia 2GB (220,000Ks) in ရန်ကုန် on ipivi.com
Asus i3 3rd, Nvidia 2GB
#AutoCad ချ.. Game ချ.. ရတယ်နော်.. #Core i3 3rd gen. Nvidia 2GB နဲ့ (220,000 ks)
ဒီဈေးနဲ့ သုံးရမှာနဲ့ အသုံးကျမှာနဲ့ တန်မှတန် #Error ကင်းတယ်. အာမခံတယ်.. တကယ်သုံးလို့ သွက်ပါတယ်. #Cpu: i3 3rd gen
#Ram. 4GB, #Hdd. 500GB
#Graphic. Nvidia 2GB + Intel 2GB
#Battery. 3hrs, Dvd, Wifi good ဈေးလား အများကြီးလျော့ပေးထားတယ်
# 220,000 ks #ဆက်သွယ်ပါ
လှည်းတန်း၊ စိန်ဂေဟာအနီး၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ #နယ်မြို့မှဝယ်ယူအားပေးသူတွေကိုအဝေးပြေးကားနဲ့အထူးပို့ပေးပါတယ်နော်
အမည်: Asus i3 3rd, Nvidia 2GB